Apple yatosimudzira iOS 11 mu "Matipi" kubva kuIOS 10 | IPhone nhau
Apple yatosimudzira iOS 11 mu "Matipi" kubva kuIOS 10
Apple yakasimudzira kuvhurwa kwemaitiro ayo matsva ekushandisa kupfuura nakare kose, Ndinoyeuka patakafanirwa kubata maDID uye mamwe manomano ekuyedza maBetas vachinyepedzera kuva vagadziri, zvisinei, ikozvino kuwana iyo Betas kuri nyore kupfuura nakare kose, tinogona kuti Apple inopa hype kune ayo matsva mashandiro masisitimu, zvakanyanya zvekuti iri pamberi pedu mukati meiyo yapfuura vhezheni.
Haadi kuti iwe urasikirwe neimwe nhau, ndosaka vakashandisa nzira iyo isu tanga tisati tamboona kusvika zvino, taura nezveramangwana vhezheni yeIOS kubva kune «Matipi» kunyorera, iyo yatinovenga tese uye vazhinji vedu vanopedzisira vadzima.
Muenzaniso watinawo mukubata uku kweshamwari dze 9to5Mac, sezvo mushanduro yeSpanish inongopa iyo skrini iyo yatinoratidza mumusoro. Mune ino kesi ivo vanoda kutiratidza zvese zvakanakira iyo Control Center iyo iri kuuya muIOS 11, imwe yenyaya dzinokosha uye kuti hatina kuda kurega kumhan'arira pa iPhone News. Sezvo isu tichinyatso kuziva, isu tinoedza maBetas uye isu tiri kugadzirisa nezve kwavo kuita uye kwavo nhau, saka tarisa kutenderedza webhu kana uine kusahadzika chero musoro wenyaya. Kuenderera mberi muchirongwa chekare, matipi eIOS atotanga kutipa dzidziso pamusoro pezvirimo zvatichawana muIOS 11.
Iyo yekupedzisira vhezheni yekushandisa system inosvika munaGunyana 12, kunyangwe isu tave muBeta 10 iyo ingangove iyo Goridhe Tenzi. Muchidimbu, tinokurudzira kuti iwe uende kuburikidza nemazano uye utore mukana weakawanda mafundo pamusoro peIOS 11 yatinayo muApple News, yatinoziva iwe unofarira zvakanyanya kupfuura maZano.
Iva sezvazvingaita, isu takatarisana neyekushambadzira system iyo Apple yanga isati yamboshandisa kusvika ikozvino, uye zvakanaka kuti inobata nemakambani akaita seGoogle, izvo zvave zviri kupa tabarra ine Android Oreo (iyo yaisazodaidzwa kuti pakutanga asi gare gare yakaita) kwemwedzi mitanhatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple yatosimudzira iOS 11 mu "Matipi" kubva kuIOS 10
Podcast 9x01: Kuisa nzira yeiyo iPhone 8
Izvi ndizvo zvinoita iyo iPhone 8 inofanira kutaridzika senge ichienzaniswa neiyo iPhone 7 skrini